बिरामीलाई खुशीको खबर ! डाक्टरहरुको आन्दोलन स्थगित, सरकारलाई अल्टिमेटम ! - बिरामीलाई खुशीको खबर ! डाक्टरहरुको आन्दोलन स्थगित, सरकारलाई अल्टिमेटम !
बिरामीलाई खुशीको खबर ! डाक्टरहरुको आन्दोलन स्थगित, सरकारलाई अल्टिमेटम !
२०७५, १८ भदौ, 05:28:21 PM
काठमाडौँ । १२ घण्टा लामो छलफलपछि आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । नयाँ मुलुकी ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सरकारले सहमति जनाएपछि डाक्टरहरु तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका छन । एक हप्ताका लागि आन्दोलन स्थगित गरेर चिकित्सकहरुले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई भनेका छन ।
चिकित्सक संघसँगको सहमतिलाई आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले सदर गरेमा अहिले हड्तालमा उत्रिएका डाक्टरहरु सेवामा फर्किनेछन । सरकारले यसअघि जस्तै बचन दिएर फेरी ढाँटेमा आन्दोलन जारी राख्ने संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भदौ १ गतेदेखि लागु भएको नयाँ मुलुकी ऐनमा आपत्ति जनाउदैँ चिकित्सकहरुले आन्दोलन चर्काएको २४ घण्टामै सरकार सहमति गर्न बाध्य भएको छ ।
तर अहिले भएको सहमति कार्यान्वयनमा भने केही डाक्टरहरुले शंका व्यक्त गरेका छन । यद्यपी अहिलेको लिखित सहमतिले मंगलबारदेखि चिकित्सकहरु स्वास्थ्य सेवामा फर्किने भएपछि बिरामीलाई राहत हुने भएको छ ।
नयाँ मुलुकी ऐनमा बिरामीको उपचारमा लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई ५ बर्ष जेल र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले छानबिन नगरीकनै अनुमानकै भरमा डाक्टरलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
चिकित्सकले सजायको समय घटाउनुपर्ने र बिरामीको उपचारमा लापरवाही भए नभएको बारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागमा सरकारले सहमति गरेको छ ।
१ं. दफा २३० मा रहेको अनुभवको आधारमा पनि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने ।
२. उपचारका विषयमा कसैले उजुरी गर्न चाहेमा ६ महिनाभित्र उजुरी हाल्नुपर्ने ।
३. डिउटीमा रहेका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र हातपात गर्नेलाई पक्राउ गरी धरौटीमा नछाड्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
४. स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्नेलाई पनि पक्राउ गरी धरौटीमा नछाड्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
५. हेलचक्राइ, लापरबाही भएको विषयमा सम्बिन्धत काउन्सिलले छानविन गरेर प्रतिबेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने।